वाइडबडीमा थप अनियमितता - समाचार - कान्तिपुर समाचार
वाइडबडीमा थप अनियमितता
जेष्ठ ३, २०७६ कृष्ण ज्ञवाली
काठमाडौँ — नेपाल वायुसेवा निगमका दुइटा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा थप अनियमितता भेटिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको पछिल्लो लेखापरीक्षणमा प्रस्तावअनुसार विमानको अधिकतम अवतरण र शून्य इन्धन क्षमतासमेत नभएको भेटिएको हो । महालेखाले शंकास्पद रूपमा खडा गरिएको कम्पनी हाई-फ्लाई-एक्सको बिलबिजकमाथि समेत शंका व्यक्त गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत वर्ष नै वाइडबडी विमान खरिदका क्रममा अनियमितता भएको भनी वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यही प्रतिवेदनमा आधारित भएर छानबिन गर्ने क्रममा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्षसहित थप कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो ।
‘हालसम्म छानबिन भएर औंल्याइएका विषयवस्तुबाहेक अनियमिततालाई थप प्रमाणित गर्ने केही अन्य विवरणसमेत भेटिए,’ महालेखा स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘ती विषयवस्तुलाई प्रतिवेदनमा समेटेका छौं । सम्बन्धित निकायले थप अनुसन्धान र कारबाही गर्लान् ।’
तौलमा थप गडबड
सुरुमा प्रस्ताव पेस गर्दा अमेरिकाको एएआर सामेल भएकामा त्यसलगत्तै पोर्चुगलको हाई-फ्लाई एयरलाइन्स र जर्मनीको जर्मन एभिएसन क्यापिटललाई पनि सामेल बनाएर उसले कन्सोर्टियम तयार गरेको थियो । त्यही कन्सोर्टियमले पछि एक डलरमा खडा भएको हाई-फ्लाई-एक्स नामक कम्पनी खडा गरेर उसैसँग निगमलाई विमान खरिदको सम्झौता गराइदिएको थियो । महालेखा स्रोतले भन्यो, ‘सुरुमा जे प्रस्ताव गरेका थिए, पछि त्यसमा मनोमानी फेरबदल गरे ।’
अधिकतम भारवहन क्षमता (म्याक्सिमम टेक अफ वेट-एमटीओडब्लू) २४२ टन प्रस्ताव गरेर २३० टन क्षमताको विमान भिœयाएको भनी आलोचना भएको अवस्थामा लेखा समितिले त्यसलाई समेत नोक्सानी भनी अनियमितताको अंकमा समावेश गरेको थियो । महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले अवतरण गर्दाको अधिकतम तौल (म्याक्सिमम ल्यान्डिङ वेट-एमएलडब्लू) र इन्धन नराख्दाको अधिकतम तौल (म्याक्सिमम जिरो फ्युल वेट-एमजेडएफडब्लू) मा समेत तोकिएअनुसारको क्षमता नभएको औंल्याएको हो ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आपूर्तिकर्ताहरूले अवतरण गर्दाको अधिकतम भार १८२ टन प्रस्ताव गरेकामा १८० टन क्षमताको विमान उपलब्ध गराएका छन् । विमान, यात्रु र कार्गो सामानसमेत जोडेको तर इन्धनबिनाको तौल (एमजेडएफडब्लू) १६६ टन हुनुपर्नेमा १८६ टन क्षमताको विमान उपलब्ध गराइएको छ ।
एमजेडएफडब्लूको तौल जति कम भयो, विमानले उति बढी इन्धन, यात्रु तथा कार्गो बोक्न सक्छ । अधिकतम इन्धनले लामो दूरीको उडान भर्न सक्छ भने यात्रु र कार्गोको क्षमता बढी भए विमान कम्पनीलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट फाइदा हुन्छ । निगमलाई प्रस्ताव गर्ने कन्सोर्टियमले सुरुमा इन्धनबिना यात्रु र कार्गोसहितको विमान १६६ टनको प्रस्ताव गरेको थियो । पछि भने १८६ टनको उपलब्ध गरायो ।
यसअघि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि उडान भर्दाको अधिकतम तौल (एमटीओडब्लू) मा करिब १२ टन फरक परेको र त्यसले निगमलाई ९२ करोड रुपैयाँ क्षति पुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो । उडान भर्दाको अधिकतम तौल २४२ टन उल्लेख गरी पछि २३० टन क्षमताको विमान ल्याइएको थियो ।
लेखा समितिको उपसमितिले ११ वटा प्रस्तावक कम्पनीमध्येको एकको आधार हेरी प्रतिमेट्रिक टन ३ लाख ५० हजार डलरका दरले क्षतिको हिसाब निकालेको थियो । यसबाट प्रतिविमान ४२ लाख (४.२ मिलियन) डलर क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपसमितिले ११२ रुपैयाँका दरले हिसाब निकाल्दै दुईवटा विमानमा ९२ करोड रुपैयाँ क्षति भएको उल्लेख गरेको थियो ।
बिल नै शंकास्पद
सुरुमा एउटा कम्पनीले पठाएको प्रस्तावमा अन्य दुई कम्पनीसमेत थपिएपछि अमेरिकाको एएआरसहितका कम्पनीहरूले आयरल्यान्डमा हाई-फ्लाई-एक्स नामक कम्पनी खडा गरेका थिए । पछि निगमले विमान खरिदको सम्झौता गरेको उक्त कम्पनीले निगमलाई पेस गरेको बिलबिजक नै शंकास्पद र अपत्यारिलो भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘सम्झौताअनुसार दुई विमानको २३ अर्ब २० करोड ८३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको निगमले बिलबिजकको निश्चित ढाँचाबेगर खाली कागजमा हाई-फ्लाई-एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेड इनभ्वाइस भनी सही गरी रकम उल्लेख गरेको कागजलाई बिल मानी पत्रको अन्त्यमा एयरबसले दुईवटा विमानको रकम भुक्तानी पाएको भनी लेखेको भरमा स्वीकृत गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर कति रकम भुक्तानी पाएको हो, खुलाएको छैन ।’
महालेखाका अनुसार वाइडबडी विमान खरिदका क्रममा कानुनी परामर्शमा कर्पोरेट कानुनविज्ञ गान्धी पण्डित संलग्न थिए । उनले ‘एक्सपोजर’ का लागि भन्दै छोरा आभास पण्डितलाई संलग्न गराएका थिए । लेखा समिति र महालेखाको प्रतिवेदनमा विदेश भ्रमणको टोलीमा आभासको नामसमेत समावेश छ ।
निगमलाई दीर्घकालीन रूपमा नोक्सानी परेको ठहरसहित लेखा समितिले एक डलरको लागतमा खडा गरिएको ‘हाई-फ्लाई-एक्स’ सँगको कारोबारलाई शंकास्पद भनेको थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘हाई-फ्लाई-एक्स र एयरबसबीचको सम्झौतामा जहाजको मूल्यबारे भएका कागजात गायब पारी बाँकी कागजात मात्रै उपलब्ध गराएकाले ठूलो रकम अपचलन भएको देखिन्छ ।’
उत्पादन गर्दाको क्रम संख्या (एमएसएन) पटकपटक परिवर्तन गरिएको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदनमा त्यसैका कारणले विमानको तौल क्षमतासमेत घटाइएको लेखा समितिको विवरणमा उल्लेख छ । महालेखाले गत वर्ष नै रकम भुक्तानीका लागि एस्क्रो एजेन्टसँगको सम्झौता नाटकीय प्रकृतिको रहेको भनी औंल्याएको थियो, जुन विषयलाई लेखा समितिले समेत त्यसमा भ्रष्टाचार भएको किटान गरेको थियो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १० प्रतिशतसम्म खरिदको मूल्य घटबढ हुँदा मूल्य समायोजन नहुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसविपरीत २ दशमलव ४४ प्रतिशतका दरले मूल्य वृद्धि गरेका कारणले दुई विमानमा ६७ लाख ८८ हजार १०९ अमेरिकी डलर बढी भुक्तानी भएको छ भनी महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रतिडलर १ सय १२ रुपैयाँको तत्कालीन विनिमय दरअनुसार यो रकम ७६ करोड २ लाख रुपैयाँ हो ।
विमान खरिदका क्रममा ३१ जनाले विदेश भ्रमण गरेका कारण भ्रमण भत्ता मात्रै ७३ लाख ७३ हजार खर्च भएको र यस्तो अनावश्यक खर्चको कुल रकम १ करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७६ ०७:४०
५ वर्षमा एसिड प्रहारबाट १२ महिला र ३ पुरूष पीडित भएका छन् । प्रहरीका अनुसार धेरै घटनामा पीडित किशोरी छन् । घटनाको अन्तर्यमा प्रेमसम्बन्ध र प्रतिशोध मिसिएको छ
जेष्ठ ३, २०७६ जनकराज सापकोटा
काठमाडौँ — चार वर्षअघि काठमाडौंको वसन्तपुरमा भएको एसिड प्रहारको घटनालाई सम्झाउने गरी बुधबार राति कालोपुलमा २० वर्षीया जेनी खड्कामाथि एसिड प्रहार भयो । राति झन्डै साढे सात बजे डेराबाहिर बोलाएर विष्णु भुजेलले एसिड छ्यापेका थिए । प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनलाई काँडाघारीस्थित एक भट्टीमा रक्सी पिइरहेको अवस्थामा राति १० बजे पक्राउ गरेको थियो ।
जेनीकी आमा कमलाका अनुसार गाला, घाँटी र काँध एसिडले जलेको छ । उनको कीर्तिपुरस्थित बर्न सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ । पाँच वर्षअघि ८ कक्षा पढदै गर्दा जेनीले विष्णुसँग भागीविवाह गरेकी थिइन् । छोरा पाएपछि मात्रै जीवनले उनलाई काभ्रे, दाप्चास्थित घर लगे । त्यही बेला उनले श्रीमानले झुक्याएको र घरमा पहिली श्रीमती भएको थाहा पाएकी थिइन् । त्यस लगत्तै उनी माइती आएर कालोपुलस्थित डेरामा आमा र बैनीसँग बसिरहेकी थिइन् ।
पहिली श्रीमती वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि एक्लै परेका विष्णुले उनलाई आफूसँगै बस्न कर गरिरहेका थिए । काभ्रेको पनौतीमा मोटरसाइकल वर्कसपमा कार्यरत उनी जेनीले आफनो कुरा नमानेपछि बुधबार पनौतीकै एक सुन पसलबाट रक्सीको सानो सिसीमा एसिड लिएर काठमाडौं आए । आमा घरमा नभएका बेला साँझ ७ बजेतिर विष्णुले डेरामा पुगेर जेनीलाई तान्दै बाटामा ल्याए र एसिड छ्यापेर फरार भए ।
प्रहरी परिसर काठमाडौंका डीएसपी होबिन्द्र बोगटीका अनुसार विष्णुले बनेपाको सुनचाँदी पसलबाट एसिड किनेका थिए । एसिड प्रहार लगत्तै जेनी चिच्याएपछि स्थानीयले उनलाई चाबहिलको ओम अस्पताल पुर्‍याएका थिए । त्यहाँ उपचार नहुने भएपछि कीर्तिपुरको बर्न सेन्टरमा पुर्‍याइएको थियो । डीएसपी बोगटीका अनुसार अस्पताल लगेपछि पनि जेनीको शरीरमा पोलेको गन्ध आइरहेको थियो भने एसिडले बेडको तन्नासमेत डढेको थियो । उनले भने, ‘एकदमै पीडादायक अवस्था थियो । मैले त हेर्न पनि सकिनँ ।’
महानगरीय प्रहरी वृत्त कमलपोखरीमा भेटदा जेनीकी आमा भावविहवल अवस्थामा थिइन् । शब्द पनि घाँटीमै अडकिएजस्तो उनी बोल्न सकिरहेकी थिइनन् । रातभर अस्पतालमा छोरीलाई रुँघेर थप कानुनी प्रक्रियाका लागि बिहीबार बिहानै कमलपोखरी वृत्त आएकी उनी अनिदो अनुहार र आँखाका डिलभरि आँसु लिएर टोलाइरहिन्, धेरै बेरसम्म बोलिनन् । कान्तिपुरको अनुरोधमा उनले आफैंलाई सम्हाल्दै आक्रोश पोखिन्, ‘बोलेर मात्रै के होला र ? खै निर्मला पन्तले न्याय पाएको ? त्यस्तै त होला ।’
यति भनेपछि उनी धेरैबेर रोकिइन् अनि आफैंलाई सम्हाल्दै भनिन्, ‘नहुने कुरा भइसक्यो । मलाई न्याय चाहियो । दोषीलाई यस्तो कारबाही होस्, भोलिका दिनमा मेरी छोरीलाई जस्तो कसैलाई नपरोस् ।’
कानुनी प्रक्रिया सकिएपछि उनले घटघटी चिसो पानी पिइन् । आफैंभित्रको छटपटीलाई शान्त पारिन् र घटनाबारे सुनाइन् । बुधबार घटना हुँदा उनी बालुवाटारस्थित एक घरमा काम गर्दै थिइन् । श्रीमानको मृत्युपछि सुत्केरी स्याहार र घरायसी काम गर्दै सानी छोरी र जेनीको हेरचाह गरिरहेकी थिइन् । ‘हुर्रिंदै घर आएपछि त मेरो होसै हरायो,’ उनले भनिन् ।
उनले कलिलैमा छोरीलाई विष्णुले मायाजालमा फसाएको सुनँइन् । ‘बिहेपछि पनि उसले अत्यधिक मदिरा सेवन गर्थ्यो, छोरीलाई कुटपिट गर्थ्यो,’ उनले भनिन् । केही समय विष्णु र जेनी ओखलढुंगामा बसेका थिए । त्यहाँ छँदा पनि मदिरा सेवन गर्ने र कुट्ने गरेपछि विष्णु प्रहरी नियन्त्रणमा पनि बस्दै, छुटदै गरेका थिए ।
कमलाले आफूसँग उपचार गर्ने खर्च पनि नभएको सुनाइन् । ‘काम गर्ने घरका मान्छेले केही रकम दिए, केही सापटी खोजेँ,’ उनले सुनाइन्, ‘हिजै मात्र आठ हजार खर्च भयो । अरू पैसा कहाँ खोज्ने ? न माइतीतिर दिन सक्ने अवस्था छ न घरमै खर्चने आधार छ ।’
यति भनेपछि उनी धेरबेर बोलिनन् । आँखाका डिलमा छचल्किएको आँसु हर्थुङ्गाले पुछिन् र भनिन्, ‘विष्णु नाम भएर के गर्नु, राक्षसजस्तो व्यवहार देखाएपछि । त्यसको नाम कहिल्यै सुन्न नपरोस् । जसरी हुन्छ मलाई न्याय चाहियो ।’ घटनापछि जेनीका छोरालाई पुष्पा बस्नेतको प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
एसिड प्रहारको शृंखला
चार वर्षअघि २०७१ फागुन १० गते ट्युसन सेन्टर जाँदै गरेका सीमा बस्नेत र संगीता मगरमाथि जीवन विकले एसिड छ्यापेका थिए । संगीताले प्रेम अस्वीकार गरेको प्रतिशोधमा जीवनले नयाँ सडकबाट एक सय २५ रुपैयाँमा एसिड किनेर ल्याई छ्यापेका थिए ।
यस्तै प्रकृतिको घटना चार वर्षपछि कालोपुलमा दोहोरियो । दुवै घटनामा प्रतिशोध साध्नकै लागि एसिड प्रहार भएको र आरोपितले सजिलैसँग एसिड किनेर ल्याएको देखिन्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ पछिका ५ वर्षमा एसिड प्रहारका घटनाबाट १२ महिला र ३ पुरुष पीडित भएका छन् । प्रहरीका अनुसार अधिकांश यस्ता घटनामा किशोरी पीडित बन्ने गरेका छन् र घटनाको अन्तर्यमा प्रेमसम्बन्ध र प्रतिशोध मिसिएको भेटिन्छ ।
प्रहरीको तथ्यांकले पाँच वर्षयता एसिड प्रहारका घटनाबाट पीडित बन्ने महिलाको संख्या बढिरहेको देखाउँछ । जस्तो कि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा एसिड प्रहारबाट ३ महिला पीडित बनेका थिए भने २०७५/७६ मा एसिड पीडित महिलाको संख्या ४ पुगेको छ ।
२०७५ असोज पहिला साता आफूभन्दा तेब्बर उमेरका ५० वर्षीय रामबाबु पासवानले रौतहट चन्द्रनिगाहपुर ६ की १८ वर्षीया सम्झनाकुमारी दासमाथि एसिड छ्यापेका थिए । एसिडबाट अनुहार जलेकी सम्झनाको कीर्तिपुरस्थित बर्न सेन्टरमा उपचारक्रममा मृत्यु भयो । प्रेम अस्वीकार गरेकै झोकमा रामबाबुले सम्झनामाथि आक्रमण गरेका थिए ।
२०७५ असोजको पहिलो साता नै नवलपरासीको कावासोती १६, डन्डा हरबासीकी २७ वर्षीया वसन्ती परियारमाथि छिमेकी ३७ वर्षीय विमल श्रीपालीले एसिड प्रहार गरेका थिए । वसन्तीको अहिले पनि उपचार चलिरहेको छ ।
पूर्वडीआईजी नवराज ढकाल क्षणिक प्रतिशोध साध्न पीडकले सहजै रूपमा उपलब्ध एसिड दुरुपयोग गरिरहेको बताउँछन् ।
उनले दक्षिण एसियाली देशमा युवतीमाथि एसिड प्रहार गर्ने घटना हुने गरेको बताउँदै एसिडको खुला किनबेच र सहज उपलब्धता प्रमुख समस्या रहेको बतँए । एसिड प्रहारका घटना समेटिएका फिल्म र एसिड प्रहारका घटनाबारे समाचार तन्नेरीहरूको अवचेतनमा रहने र प्रतिशोध साध्नकै लागि उनीहरूले सहज रूपमा पाइने एसिड प्रयोग गर्ने गरेको उनले बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७६ ०७:३६